izindleko zokuphatha - kubalulekile ukuphatha izimali yezinhlangano yingxenye izindleko samanje kwamabhizinisi kanye nomthelela ekwakhekeni izindleko zokukhiqiza.
Ngo ezimali nezindleko zokuphatha uzindla akhawunti debit izindleko zebhizinisi jikelele. Bangaphinde abhekwe njengesigebengu okuvela izindleko ukuthi akuzona okuhlobene inqubo ukukhiqizwa futhi kuyadingeka ukuze balondoloze impahla kanye eziyinkimbinkimbi yezimali ibhizinisi e sekubika. Kulokhu, zabizwa kuya izindleko, noma enye - ukulahlekelwa yenkampani.
izindleko zokuphatha zihlanganisa amaholo nokuphathwa kwabasebenzi amabhonasi, zohambo enesitembu, izidingo ihhovisi, ezokuthutha, kwetakhiwo izinjongo zokuphatha, izindleko amortization, ihhovisi yesondlo (yerenti, Tinsita, ukuxhumana), amasevisi third-party (umshwalense, zomthetho nokuhlola) kanye nabanye. umholo kunqunywa ngokuvumelana abasebenzi, ihhovisi kanye nezitembu kuyinto 2-3% we izisebenzi ukuphathwa iholo. Izindleko nokugcina izakhiwo ibalwa efanayo ukuthenga imali (ugesi, amanzi, ngifudumeza). Ngezinye ukulungiswa wamanje babe 3%, imishini - 7% wenani zabo phezu balance sheet. Ukwehla kwentengo amacala ayalingana 6.5% izitshalo, futhi 6.1% ukuze workshop ukubaluleka ezimpahleni ezingasuki phansi izinjongo zezomnotho-zokuphatha.
ukuphathwa Ibhajethi izindleko manje ngokuqondile ibalwa ukuze siqinisekise ukusebenza salo esivamile. izindleko zokuphatha kuhlelwa ngezindlela eziningana. Eyokuqala (esivamile) - sihlinzekela umkhawulo walolu hlobo lokungabaza isithakazelo ngezindleko yesikhwama iholo umuntu aqashelwe. Eyesibili ( "eyenziwe") - esekelwe indexation yaminyaka yonke ezingeni izindleko ngokuhambisana nezinga lokukhula ngoba isikhathi. Kungenzeka futhi ukuhlela ngokuhlanganyela umphumela wokugcina umsebenzi. Le ndlela iyona ngempumelelo kakhulu, kodwa ngokungafani amazwe aseNtshonalanga, eRussia cishe ayisetshenziswa.
Ngo amafemu amaningi uhlela ukuphathwa izindleko eqhubeka izinyanga eziningana. Wenze uhlelo lokusetshenziswa kwemali okunokwethenjelwa - umcimbi kunalokho labor- isikhathi, ngoba ukuvumelana ehilelekile ngempela eziningi abahlanganyeli.
izindleko zokuphatha ngqo umongo (kwetimboni, temabhizimisi) imisebenzi ibhizinisi akuzona ahlobene. Nokho, accounting kubonise debit akhawunti abo overheads. Uma ezimali Inqubomgomo webhizinisi ikuvumela ukuba zihlanganisa lezi zindleko kuphela kancane izindleko zayo zokukhiqiza, it ovunyelwe ukuba ngikulobele zona nge ukuthenga okuthile.
izindleko zokuphatha kuhlelwa ngendlela isabelomali ehlukile, kungukuthi abopha yenqwaba ukukhiqizwa noma ukuthengiswa, kubalwa kungakhathaliseki Dynamics imali yenkampani. Eziningi zalezi izindleko siphathelene elinganiselwe uhlobo izindleko. Basuke ihlukaniswe izindleko exhumene kwamafa ebhizinisi kanye nezindleko ezihambisana nentuthuko yayo. Isigaba sokuqala sihlanganisa izinto ezifana ukwehla, izindleko wokugcinwa imishini, izinkokhelo ukuqasha, kanjalonjalo. Basuke kuhlelwe ngokuhlanganyela ukubaluleka kanye service impilo kwezimali ezimpahleni ezingasuki phansi. Ingxenye yesibili (iholo lwabaphathi kanye nezinye izifundiswa, onjiniyela kanye nochwepheshe, kanye nokuphathwa kwabasebenzi, umumele, ukuthatha uhambo, zohambo nezinye izindleko) kuhlelwa ngamunye inkampani ngayinye.
izindleko zokuphatha kumele kudingeke ukuthi kubhalwe. Imibhalo ezinjalo oda lokukhokha, amarisidi, i-akhawunti yemali ezigunyaza ukuboshwa kwabathile. Ngaphandle le mibhalo inhlangano angenalungelo lokukuthola ukuthatha akhawunti ye zokuphatha izindleko intela.
Indlela yokwenza izinzuzo sokukhubazeka yesikhashana
Inkokhelo umsebenzi ngesikhathi ngisebenza ishifu (Labour Ikhodi)
Inhlokodolobha lwezezimali - Iyini?
Indlela ukupheka esihlwabusayo futhi unempilo ithanga ujamu nge amabhilikosi omisiwe?
I-Smart TV LG: isethaphu, amawijethi, izinhlelo zokusebenza, ukubhaliswa
Izintandokazi zamafasitela sills: i-pelargonium yasebukhosini, ukunakekelwa ekhaya
Ingabe Zikhona Izimo Ezenza zokukhiqiza kanye nezinhlobo zazo: ukuphathwa ohlelweni phakathi kwabaqashi nabasebenzi
Umlando lokusungula nothando Kerri Otis
Infinity Blade 3: Izimfihlo ndima
Izimpawu ephakeme kumaseli omdala
Miracle endaweni evulekile - emoyeni yaseshashalazini
Yiziphi izici lapho i-motor block ene-shaft-off-off shaft inayo?